Maamulka Puntland oo uga digay dadweynaha maamulkaasi inaan laga hadli Karin muddo kororsiga Faroole. Soomaalinews.com 26 Sep 12, 16:47
Maamulka Puntland ayaa uga digay dadka shacabka ah ee ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi muda kororsiga halka sano ah ee uu dhawaan ku dhawaaqay Madaxweynaha maamulkaasi C/raxmaan Sheekh Maxamad Faroole.
Wasii ku xiggeenka Amniga maamulka Puntland C/Jamaal Cismaan Maxamad oo maanta shir jaraa�id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa uga digay dadweynaha Reer Puntland in aan laga hadli Karin mudo kororsiga halka sano ah ee uu dhawaan shaaciyey Madaxweynaha maamulkaasi C/raxmaan Faroole.
C/Jamaal waxa uu sheegay in tilaabo laga qaadi doono cidii ka hortimaada mudo kororsiga Faroole lana waafajin doono sida sharciga waafaqsan sida uu yiri.
�Dastuurka Puntland waxa uu sheegayaa in madaxweynaha muddo shan sano ah xilka uu heyn doono, kuma qorna dastoorka in waqti la iska qaado� ayuu yiri isagoo hadalo kulul oo hanjabaad ah u jeediyey siyaasiyiin uu sheegay inay ka jorjeedaan maamulka Faroole.
Ugu danbeyntii Wasiir ku xigeenka Amniga maamulka puntland C/Jamaal Cismaan waxa uu sheegay in maamulka uu wado nidaaam Asxaab ku salaysan oo dadka u horseedaya Dimuqraadiyad.